Dagaalkii oo xoogeystay Jiidaha dagaalka oo horumar laga sameeyey & Puntland oo ku dhawaaqday – Puntlandtimes
Dagaalkii oo xoogeystay Jiidaha dagaalka oo horumar laga sameeyey & Puntland oo ku dhawaaqday
GAROOWE(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya Jiidaha hore ee ay isku horfadhiyaan ciidamada DIfaaca Puntland & kuwa maamulka la baxay Somaliland ayaa sheegaya in ay ciidamada Puntland horumar ka sameeyeen jiidaha dagaalka.
Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa sii kordhaya, waxaana la xaqiijiyey in dhaawacyo ka dhashay dagaalkan la geeyey Isbitaalada Garoowe iyo Laascaanood, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey dhaawacyada.
Wararku waxay cadeynayaan in uu jiro dagaalka oo sii xoogeystay saacadihii ugu dambeeyey.
Wasiirka Warfaafinta ee dawladda Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo shir jaraa’id goor dhaw ku qabtay barta hogaaminta dagaalka ee Saxaafadda ayaa sheegay in Somaliland lagu jabiyey dagaalka.
ISHA KU HAAY WARARKENA RIIX HALKAAN
War degdega Ciidamada qaranka somaliland oo burburiyey caasimada garoowe ee mamul guboleedka majeerteeniya oo ay gabi ahaanba la wareegeen.
waxa warar hoose sheegayaan in gacanta lagu dhigay madaxweyne ku xigeenkii puntiland Camay. weerer rogaal waxa kale oo wararku sheegayaan ciidan la soo jebiyey balse aanba warka hayn garoowe in lala wareegay oo iyagana gacanta u galay soomajeesta yaasha somaliland goor dhow filo iyaga oo toos loo soo tabinayo
Sooma jeeste says:
allow alle ha biqleeso garowe meel ciyaar maamulka cuqdadland ku habeesan karaan ma ahe
Wax ma garte awalba idoor dagaal ma aqoon aan kan social media ahayn, bal growe iyo lascanood kii lagu hor marro aynu eegno boowe.
Dhafoor Qiiq Edbiye says:
been yaan laysku sheegin qoladii yaaci jidhay ayuunbaa yaaci
Buuqa iska dhaaf. Iidoor wagashlee, meeqo bilood aanu idin lahayn, war dhul aadan lahayn ma joogi kartee, adoo nabad ah, isaga bax.
+++ NINKII DHOOF KU YIMID BAA XABBADO DHIBAYSAA++
IIDOOR WAGASHLEE, awalba abtiyoow iyo xoogaa lacag ah baad ku timid, ee adkayso xabbada kuleelkeeda, ileey joogi weyday gurigaagii.
Osman Abdala says:
Tuko raw Somaliland male puntland maleh waa shuks somaliweyn waana dad isdhaley waad dhashey wixii an darenlhynbaa ku farxa
Dinidu way isbedeshay Idoor Idoorki hore maaha oo qayilaadi Burco iyo Hargeisa way soo dhaafeen ee xabbad maanta la bilaaby si sahlan uuma joogsanayso taa ha la ogaado. Ciyaari waa kow. Hartina haday daba dhlifka iska ilaaliyaan waa GUUL